Dowladda Soomaaliya oo ugu yaraan 40 askari u xirtay weerarkii guriga Cabdi Qeybdiid - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo ugu yaraan 40 askari u xirtay weerarkii guriga Cabdi Qeybdiid
December 30, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Ciidamo katirsan doowladda Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay ugu yaraan 40 askari oo ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday guriga senator Cabdi Cawaale Qeybdiid, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda ee SONNA.
Labo sargaal oo lala xiriirinayo weerarka ayaa sidoo kale la xiray, sida ay baahisay SONNA.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa amray taliyaha ciidamada in uu baaritaan deg deg ah ku sameeyo weerarkii ka dhanka ahaa guriga senator Cabdi Cawaale Qeybdiid.
Duhurnimadii maanta oo Sabti ah ayaa ciidamo katirsan dowladda Soomaaliya waxay weerar ku qaadeen guriga Cabdi Qeybdiid, lama oga sababta ka dambeysa weerarkaas ilaa iyo hadda.
December 30, 2017 Madaxweynaha Soomaaliya oo ku amray taliyaha ciidamada in uu baaritaan deg deg ah ku sameeyo weerarkii ka dhanka ahaa guriga Cabdi Qeybdiid
February 22, 2018 Culimada ku sugan Boosaaso oo codsaday in dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo gudashada Xajka
Ciidamada dowladda Puntland oo howlgalo ammaan ka bilaabay magaalada Baran ee gobolka Sanaag
Baran-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Puntland ayaa howlgalo ammaan ka bilaabay magaalada Baran ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Howlgalka ayaa la sheegay in lagu xaqiijinayo ammaanka [...]